Ọla Bush, Case Cotton onye na-atụtụ Parts, Micron Cotton Spindle - Noblefu
· Anyị ụlọ ọrụ kpuchiri 5,000m2. Ọ nwere ọtụtụ ihe technology ike , mma mmepụta na ule na-zuru okè mgbe-sales ọrụ. Anyị osisi igbu dum usoro quality management
. Anyị nwere 20sets CNC center igwe, 30 tent Auto-CNC lathes na ndị ọzọ na-egwe ọka, malite ịgba, egweri, waya ọnwụ etc a zuru tent nke ígwè ọrụ. Anyị pụrụ ime ka tooling na ụlọ na anyị nwere ike ime ka ODM maka anyị dị iche iche ahịa. Anyị na-enwe ọkachamara nnyocha ngwá , dị ka CMM, ekweghị ekwe tester, ike tester, roughtness tester, wdg Anyị nwere ike Nlụpụta dị iche iche owu onye na-atụtụ akụkụ site CNC machining process.for JD owu onye na-atụtụ igwe .. Anyị na-eme dị iche iche n'isi na metal akụkụ , dị ka Chrome / Nickel plating, uzuzu mkpuchi , anodiz u na agba.
Kpọtụrụ anyị GỤKWUO
JD SPINDLE BEVEL gia NBF-371626
JD aku na Bush NBF-NBF-111948
Cotton onye na-atụtụ washer NBF278781
Cotton onye na-atụtụ Retainer Cap NBF275471